ဇင်ဗိုလ်ထက် - ကမ္ဘာ့အလင်း [2014 Album] 320 Kpbs! - Mg Shan Lay
Home Album Black T ဇင်ဗိုလ်ထက် နံရိုး ဥက္ကာမင်းသာ ဇင်ဗိုလ်ထက် - ကမ္ဘာ့အလင်း [2014 Album] 320 Kpbs!
ဇင်ဗိုလ်ထက် - ကမ္ဘာ့အလင်း [2014 Album] 320 Kpbs!
12:24:00 PM Album, Black T, ဇင်ဗိုလ်ထက်, နံရိုး, ဥက္ကာမင်းသာ,
4. လုပ်ဇာတ်ချစ်သူ [Feat.နံရိုး]
8. Secret [Feat.နံရိုး ၊ Black T]
9. အိပ်မက်လား အဖြစ်အပျက်လား
11. သစ္စာစကား [Feat.ဥက္ကာမင်းသာ]
Credit & Special Thanks ! @ Mr.Ehlar
Tags # Album # Black T # ဇင်ဗိုလ်ထက် # နံရိုး # ဥက္ကာမင်းသာ
Labels: Album, Black T, ဇင်ဗိုလ်ထက်, နံရိုး, ဥက္ကာမင်းသာ